Fitantanana: hanohana ny faritra ireo administratera - ewa.mg
News - Fitantanana: hanohana ny faritra ireo administratera
vahoaka eny ifotony kokoa. Nivoaka, omaly ary nanao ny fianianany
tetsy amin’ny fitsarana Anosy ireo administratera sivily miisa 26
mianadahy. Hiasa eo anivon’ny minisiteran’ny Atitany sy ny
fitsinjaram-pahefana eny anivon’ny faritra sy ny kaominina ny 15
amin’iireo. Miisa 21 kosa ireo hiasa eo anivon’ny minisiteran’ny
Asa sy ny fampanana asa. “Afaka miasa amin’ny minisitera sy ny
andrimpanjakana samihafa izy ireo, manomboka izao”, hoy ny
mpitarika ity andiany “Madio” avy nahavita ny fianarana teo
anivon’ny Enam ity. Nanteriny fa hisahana ny fitantanana sy ny
fampiharana ny politikam-panjakana ary solontenan’ny fanjakana eny
ifotony. Hanohana sy hanampy ara-teknika ny eny anivon’ny faritra
sy ny kaominina izy ireo, araka ny nambarany hatrany.
L’article Fitantanana: hanohana ny faritra ireo administratera a été récupéré chez Newsmada.
Coronavirus: mampanahy ny fipoiran’ny sokajy vaovao P1 any Brezila
Misy karazany vaovao hafa voatily ny Coronavirus ankoatra ilay hita tany Angletera sy any Afrika Atsimo.Tany avaratr’i Brezila no nipoiran’ity sokajy P1 ity ary manomboka miseho any Japana sy any Amazonia. Voatily tamin’ny tanàna 11 amin’ny 13 nohadihadiana ao Amazonas izy. Tao Sao Paulo izay manana mponina 46 tapitrisa, telo ny tranga mitondra ny sokajy P1, ny herinandro lasa teo. Mampanahy ny mpikaroka ny sokajy vaovao manampy ny kazarana roa efa hita. “Iray amin’ireo Coronavirus karazany 18 miseho ao amin’ny firenena Amazonas ity P1 ity”, hoy ny mpikaroka, i Felipe Naveca. Efa manadihady ity sokajy P1 ity koa ny any Japana izay efa nahatiliana azy. Voalazan’ny mpikaroka ao amin’ny Ivontoeram-pirenena japoney misahana ny valanaretina fa misy itovizany amin’ireo sokajy hita any Angeltera sy any Afrika Atsimo ity P1 ity. Maro sahady ny firenena (i Japana, i Alemaina…) nametra ny tsy fahafahan’ny sidina avy any Brezila na nandalo tany Etazonia, tany Angletera, tany Italia… hiditra any aminy noho ny tahotra hipariahan’ity sokajy P1 ity.804 ny tranga tany Mayotte tao anatin’ny herinandroAty amin’ny ranomasimbe Indianina, ao La Réunion, maty ilay marary 60 taona nitondra ny Coronavirus karazany nipoitra tany Afrika Atsimo. “Tany Kaomoro izy no nalefa notsaboina tany an-toerana ka izao maty izao”, hoy ny tomponandraikitra any. Tao anatin’ny roa andro 28-29 janoary, nahatratra 92 ny tranga niseho ka 14 amin’ireo, tranga niditra avy any ivelany. Any Mayotte kosa, tao anatin’ny herinandro (20-26 janoary lasa teo), 804 ny tranga vaovao voatily. Mitombo hatrany ny isan’ny marary miditra hopitaly 56, ary ny enina amin’ireo, any amin’ny sampana famelomana aina mihitsy. 15 koa ny tranga vaovao voamarina fa ilay sokajy 501 V2 avy any Afrika Atsimo. Any Maorisy, ny alarobia lasa teo, nisy olona avy any Frantsa voalaza fa mitondra ny tsimokaretina. Salama tsara izy fa natoka-monina any amin’ny toerana manokana ihany. Amin’izao fotoana izao, 1 241 ny olona mihiboka. 10 ny olona maty noho ny Coronavirus ary 569 ny tranga voamarina. Ho an’i Seychelles, 24 isan’andro ny tranga vaovao. 1 205 ny isan’ny tranga voatily ary efatra ny namoy ny ainy.Nangonin’i VonjyL’article Coronavirus: mampanahy ny fipoiran’ny sokajy vaovao P1 any Brezila a été récupéré chez Newsmada.
Rajoelina sy i Macron: raikitra ny fihaonana
Tena raikitra. Tsy hiova ny fotoana hihaonan’ny filoha Rajoelina sy ny filoha frantsay, i Emmanuel Macron. Hatao ny zoma 27 aogositra izao izany ao Paris.Tsiahivina fa efa nihaona ny roa tonta ny 29 mey 2021 tamin’ny fitsidihan’ny filoha Rajoelina Andry tany Frantsa. Anisan’ny notakiny tamin’izany ny hijerena vahaolana, hamerenana ireo Nosy malagasy. Niray hevitra ny roa tonta ny amin’ny hametrahana ny vaomiera iraisana eo amin’i Frantsa sy i Madagasikara. Noheverina ny hahavitan’ny dinika sy ny fifampiraharahana, nialoha ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena ka hahitana vahaolana iraisana sy vina iombonana ao anatin’ny adihevitra. Tsy tanteraka anefa izany fa teo aloha ny Covid-19. Nanampy izany ny fanapahan-kevitra noraisin’i Frantsa ny amin’ny namoahany didim-panjakana nametrahana ho faritra voajanahary arovana ny Nosy Sambatra (Îles Glorieuses). Nihantona teo ny raharaha. Andrasana ny momba izany amin’izao fihaonan’ny filoha roa tonta izao.Synèse R.L’article Rajoelina sy i Macron: raikitra ny fihaonana a été récupéré chez Newsmada.
Fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna: manomana ny fivahinian’ny papa François ny CUA sy ny prefektiora
Tsy handalo fotsiny noho ny vahiny. Mitohy ny fanadiovana sy ny fandaminana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra tarihin’ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Tafiditra ao anatin’izany koa ny fanomanana amin’ny fahatongavan’ny papa François eto amintsika. Hiara-kiisalahy amin’ny fanatanterahana izany ny CUA sy ny prefektioran’ny polisy. Hojerena ny lafiny fahadiovanan’ny tanàna, ny fandriampahalemana, ny fifamoivoizana ary ny fanatsarana amin’ny ankapobeny ny tanàna … Nisy ny fivoriana niarahan’ny kaominina, tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraly, Randriamasinoro Tahiry Ny Rina, sy ny prefet, ny Jly Ravelonarivo Angelot, ny herinandro teo teny Tsimbazaza. Nampiharina avy hatrany, nanomboka tamin’ity herinandro ity, izany fandaminana izany ary tsy amin’io fotoana hahatongavan’ny papa François io ihany fa hitohy izany.Synèse R. L’article Fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna: manomana ny fivahinian’ny papa François ny CUA sy ny prefektiora a été récupéré chez Newsmada.
Fizarana fanampiana avy amin’ny fanjakana: feno mpitokona ny ankamaroan’ny fokontany…
Horakoraka, tabataba, fifanjevoana ary fitohanana eraky ny lalàna… Nanisana, Andraisoro, Ankadikely Ilafy, Alasora, Ambatobe, Ankatso, Androndra, Anosizato atsinana, Andranomanalina Isotry, Andohatapenaka … Isan’ireo toerana nahitana fitokonana marobe niandry ny fanampiana ara-tsosialy nampanantenain’ny fanjakana.Tsy voahaja intsony ny elanelana, tsy misy miraharaha koa ny fihetsika fiarovana amin’ny valanaretina Covid-19. Nitaraina ireo mponina fa misy amin’ireo olona efa nahazo tamin’ny fanampiana teo aloha ihany no mbola nisitraka izany tamin’ity andiany manaraka ity. Nilaza koa izy ireo fa tsy mazava ny fitantanana ary voatonontonona matetika ny sefo fokontany amin’izany. « Tety aminay izao tamin’ny talata tamin’ny 08 ora alina ny fizarana ny tapakila. Ary ireo efa nahazo fanampiana tamin’ny voloahany ihany no mbola nahazo izany », hoy ny fanazavan’ny mpitokona teny Ankadikely Ilafy, omaly. Misy amin’ireo mponina no efa tonga teny amin’ny toerana izarana ny fanampiana, omaly, tamin’ny 7 ora maraina niandry izany, saingy mbola tsy nahazo. Vokany, maro ireo tezitra sy nitabataba teny an-toerana. « Ny teo anivon’ny kaominina no nanitsy ny lisitra fandaminana ny sosialim-bahoaka. Ny komitim-paritra no mahay ny olona tena sahirana eo amin’ny faritra misy azy. Efa nalefa eny amin’ny kaominina ilay lisitra, ry zareo indray no manamarina ireo anarana sao misy ireo olona fa nahazo tamin’ny andiany voalohany no miverina ao ka manala izany. Ary fenoina amin’ireo 628 nanao fitarainana mbola tsy nahazo ny fanampiana izany », hoy Randrianasolo Bien Aimé, sefo fokontany Ilafy. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mbola maro ireo olona mitangorona eny Anka­dikely, miandry ny fanampiana. « Miisa 700 ireo tapakila efa nozaraina nefa marobe ireo mbola tsy nahazo. Ao koa ireo milaza fa miverina eto indray izahay rahampitso maraina amin’ny 08 ora ahazoana izany. » ,hoy ny fanazavan’i Volasoa. Mbola marobe, hoy izy ireo, miandry ny ambin’ireo fanampiana efa voazara ka manantena ny ahazo izany ny fianakaviany.Amidy 10.000Ar ny tapakilaVoalazan’ireo mponina sasany fa mitaky vola 10.000Ar ny sefo Fokontany ho vidin’ny tapakila azahoana fanomezana. Tranga izay niseho teny Nanisana, omaly, hoy ny loharanom-baovao iray. « Tsy mandeha amin’ny fahamarinany intsony ny fizarana ny tapakila fa izay manome vola ny sefo fokontany ihany no mahazo izany. Mangataka izahay ny ijerena akaiky ny raharaha fa tsy mijery ny sahirana intsony ny olona ary manjaka ny kolikoly », hoy ny ambetin-teinin’ireo mponina. Ao koa ireo milaza fa tsy mety hizara ny tapakila ahazoana ny vatsy ny sefo fokontany, toy ny teny Androndra. Maro ireo olona nitokona teo anoloan’ny biraon’ny fokontany. Antony, nampitabataba sy nampihorakoraka ny mponina teny an-toerana. Vokany, nalain’ireo polisy ralehilahy ka nasainy niresaka tamin’ny vahoaka. Araka izany, betsaka ireo mponina tezitra amin’ny ireo sefo fokontany, ao ny mangataka ny hanalana azy ireny.Henintsoa HaniL’article Fizarana fanampiana avy amin’ny fanjakana: feno mpitokona ny ankamaroan’ny fokontany… a été récupéré chez Newsmada.
Namoizana ain’olona iray indray ny lalam-baovao mam-pitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato, tamin’ny sabotsy maraina lasa teo. Tra-doza ny fiara tsy mataho-dalana nivarina tany amin’ny tatatra. Namoy ny ainy ny mpandeha iray. Naratra ny mpamily saingy tsy misy hatahorana ny ainy. Ratra madinika kosa no hita tamin’ireo mpandeha roa hafa. “Avy any Ivato nikasa hihazo ny renivohitra ilay fiara tsy mataho-dalana. Tsy fantatra izay zava-nisy fa tampoka tsy voatana ny familiana ka lasa tany anaty tatatra. Ahiana ho nandeha mafy rahateo izy io. Vokany, nivadibadika ny fiara ka nipitika hatramin’ ny kodiarany. Mbola nifamonjena nentina tany amin’ny hopitaly ny mpandeha iray naratra mafy. Tsy tana anefa ny ainy minitra vitsy taorian’ izay”, hoy ny loharanombaovao avy amin’ny mpitandro filaminana. Matetika hitrangan’ny loza ny lalam-baovao eny Tsarasaotra, tato anatin’ny volana vitsy izay. Sodokan’ny hatsaran’ny lalana ny mpamily ka voasarika amin’ny hafainganam-pandeha haingana. Mitarika famoizana ain’olona hatrany anefa ny loza mitranga eny antoerana, araka ny fitantaran’ny mponina eny amin’ny manodidina. L’article Lozam-pifamoivoizana :: Namono olona indray ny lalambaovaon’i Tsarasaotra est apparu en premier sur AoRaha.
Rugby à XV vehivavy: hiady ny tapakila hiatrehana ny «Mondial 2021» ny Makis
Fanamby goavana no miandry ny Makis vehivavy, amin’ity. Hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny rugby lalaovina olona 15 mantsy izy ireo. Fihaonana, hiadian-toerana, ho an’ny “Mondial 2021”.Hotanterahina atsy Johannesbourg, Afrika Atsimo, ny 7 – 18 aogositra ho avy izao, ny dingana famaranana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny rugby lalaovina olona 15, sokajy vehivavy. Hanana ny lanjany, izany fihaonana izany satria hiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Mondial 2021”, tanterahina any Nouvelle-Zelande.Firenena efatra no hiady izany amin’ity dia i Afrika Atsimo, mpampiantrano, Oganda, Kenya ary ny Makis de Madagascar. Mifandimby mihaona ny rehetra ka izay ekipa be isa indrindra no ho tompondaka ary hisolotena an’i Afrika, any amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany.Raha ny fandaharam-potoana, hidona amin’ny Makis voalohany, ry zareo Kenianina. Lalao hotontosaina, ny 10 aogositra. Fihaonana faharoa, hikatrohana amin’i Afrika atsimo, ny 13 aogositra ary amin-dry zareo, Ogandà ny 16 aogositra. Manana herijika tsara handrombahana ny toerana voalohany, ny Makis, araka ny nambaran-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby. Na izany aza, nomarihiny fa ry zareo Kenianina no heverina fa ho mafy ary tsy maintsy dinganina.Raha toa kosa ka ny laharana faharoa, no misy ny Makis dia hiatrika ny “repechage”, amin’ireo kaontinanta dimy hafa. Hatreto, mbola mpilalao 36 no manaraka fanazarantena miaraka. Ny faran’ity volana jolay ity kosa vao hivoaka ny anaran’ireo 26 handrafitra ny Makis, ho atsy Afrika Atsimo. Tompondaka L’article Rugby à XV vehivavy: hiady ny tapakila hiatrehana ny «Mondial 2021» ny Makis a été récupéré chez Newsmada.
Football-D1 Analamanga : Va pour les demi-finales
Le Centre de Formation Football Andoharanofotsy (CFFA) est qualifié en demi-finale. Malgré la recrudescence des cas de la Covid-19, le championnat d’Analamanga de football première division se poursuit depuis février au centre technique national de Carion, sans spectateur. La compétition aborde sa dernière ligne droite avec les demi-finales ce jour. Deux affiches alléchantes sont au programme. Le CFFA s’est qualifié en s’imposant sans difficulté face au King Sport par 5 à 0 en quart de finale, samedi dernier. Les gars d’Andoharanofotsy défieront FFAM Anosizato qui a laminé Disciples FC sur le score de 3 à 2. Lors de l’autre demi-finale, le club Omnisport de la Police Nationale (COSPN) rencontrera Tana FC TFC Anatihazo Isotry. Les policiers ont surpris Net Foot par 2 à 1 en quart, tandis que la formation d’Anatihazo Isotry a défait Mi 20 par 2 à 0. En effet, les vainqueurs à l’issue de cette journée seront qualifiés d’office au championnat deuxième division national. La date du duel final n’est pas encore déterminée. Cela dépendra encore du discours du président de la République sur l’autorisation du déroulement ou non des compétitions. « Concernant les deux dernières équipes reléguées en D2, leurs noms ne sont pas encore connus car de nombreux clubs ont rencontré des difficultés financières et ne pourront pas jouer au championnat D2 », a fait savoir un responsable de la ligue. Seize équipes étaient en lice pour ce championnat. Elles sont issues de la section Tana-ville, Atsimondrano, Ambohidratrimo et Manjakandriana. Le programme des matches 10h30: CFFA Andoharanofotsy contre FFAM Anosizato 12h30: COSPN FC contre CF TFC Anatihazo Isotry. Manjato Razafy L’article Football-D1 Analamanga : Va pour les demi-finales est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Football-D1 Analamanga : Va pour les demi-finales a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Dihy – Fifampizarana: raikitra ny « D-Zara »
Hotontosaina etsy amin’ny Kianjan’ny Kanto Imahamasina, ny 24 septambra izao, ny « D-Zara » na ilay atrikasa momba ny dihy, karakarain’ny fikambanana « Mpandihy eto Madagasikara (M.E.G). Afaka mandray anjara ny 10 taona no ho miakatra : olon-tsotra, ny mpandihy, ny mpampianatra dihy. Tsy manavaka sokajin-dihy. Fotoana ahafahana mihaona, mandihy, mianatra, mizara, mifanoro, mifandray, mifandinika.Ireo mpampianatra dihy, hizara sy hanoro ary hampahafantatra ny fahaizana amam-pahalalana ananany. Ahafahan’ny mpandihy manampy ny traikefany sy hikoloina ny vatana. Ny olon-tsotra manandrana sy mahafantatra ny karazan-dihy maro, ahatsapany mivantana ny tontolon’ny dihy.Nanangona : HaRy RazafindrakotoL’article Dihy – Fifampizarana: raikitra ny « D-Zara » a été récupéré chez Newsmada.
Mila ampitomboina ny vola ampiasaina: 3%-n’ny ankizy malagasy no misitraka fiahiana sosialy
Ankoatra ny fanampiana avy any ivelany, mila manokana vola bebe kokoa ho an’ny fiahiana sosialy ho an’ny ankizy ny fitondrana malagasy. 3% amin’ny zaza malagasy ihany no voakasiky ny fandaharanasam-pirenena momba ny fiahiana sosialy, izay natomboka ny taona 2016 teto Madagasikara nefa ny 83% amin’izy ireo, miaina anaty fahantrana lalina, araka ny fanadihadiana natao, hoy ny solontenan’ny Unicef eto amintsika, i Michel Saint-Lot, omaly, teny Ambohijatovo. Mbola misy fepetra ihany koa ny fahazoana ireo tohana sosialy ireo (Vatsin’Ankohonana, Fiavota, Ndao hianatra…) ka ireo fianakaviana marefo tany Atsimo, Androy ary Vatovavy Fitovinany no anisany nisitraka izany. Tokony hitovy zo anefa ny ankizy ka samy hisitraka fiahiana sosialy, indrindra ireo marefo. Mahomby kokoa raha velarina ny fiahiana sosialy faobe miantefa amin’ny ankizy hahazoana vokatra tsara amin’ny fampandrosoana. Hametraka maodely miainga amin’ny traikefa tamin’ireo tetikasa efa notanterahina ny mpiray ombon’antoka teknika sy ny minisiteran’ny Mponina ary ny fiahiana sosialy, araka ny fanazavany ihany. Mitaky andraikitra goavana amin’ny fanjakana malagasy kosa ny vina hampivelatra kokoa ny fiahiana sosialin’ny ankizy mba hisitraka izany ny ankamaroany. Anisan’ny ambany indrindra maneran-tany ny vola atokan’ny fanjakana malagasy ho an’ny fiahiana sosialy. 0,7% monja amin’ny harinkarena faobe no nampiasaina hanohanana ny fiahiana sosialy (taona 2014). Tsy voasahana ao anatin’ny fandaharanasa fiahiana sosialy efa misy koa ny ankizy manana fahasembanana nefa sahirana kokoa izy ireny raha mitaha amin’ny ankizy tsotra. 5% amin’ny tokantrano marefo ihany no voasahan’ny fandaharanasam-pirenena momba ny fiahiana sosialy ary nanome toky ny fanjakana fa hiakatra ho 15% izany, ny taona 2023 ary 50% ny taona 2030.Vonjy A.L’article Mila ampitomboina ny vola ampiasaina: 3%-n’ny ankizy malagasy no misitraka fiahiana sosialy a été récupéré chez Newsmada.
ONU – Hentitra ny filoha amerikanina: “Tsy ekena ny jadona, arovana ny demokrasia”
Nitodika amin’ny firenen-drehetra ny lahatenin’ny filoham-panjakana amerikanina, i Joe Biden, tao amin’ny fivorian’ny ONU, afakomaly. Hentitra ary mazava ny hafany. “Tsipahinay marindrano ny jadona sy ny tsy fampiharana ny demokrasia. Hiaro izany hatramin’ny farany izahay ary tsy mankasitraka ny fanaovan’ny firenena sasany tsindrio fa lavo ireo tany madinika”, hoy izy. Nohitsiny fa tena manohana sy manampy ara-bola ireo firenena sahirana ary mbola hanohy izany bebe kokoa ny Amerikanina.Hanapariahana ny vaksiny maneran-tanyTsy nohadinoiny ny nanome toky ny hampitomboana ny ezaky ny iraisam-pirenena, hiadiana amin’ny Covid-19 sy ny ady atao amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. “Hampitomboina ny vaksiny any amin’ireo firenena mahantra ary tokony ho avo roa heny koa ny fanampian’ny iraisam-pirenena manoloana izao olana eo amin’ny tontolo iainana izao”, hoy ihany izy.Nanteriny fa firenena filamatra maneran-tany i Etazonia ary voalohany hatrany ary vonona hanorina hoavy mamiratra.Synèse R. L’article ONU – Hentitra ny filoha amerikanina: “Tsy ekena ny jadona, arovana ny demokrasia” a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa amin’i Frantsa: raikitra ny zotra an-tariby “téléphérique” Anosy- Ankatso
Notanterahina, omaly, tao amin’ny biraon’ny minisiteran’ i Eoropa sy ny Raharaham-bahiny ao Paris ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piara-miasa momba nyfametrahana ny fitaterana an-tariby “Ligne téléphérique” sy ny fanitarana ny “Centrale hydroélectrique” ao Mandraka. Fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta malagasy sy ny tahirim-bolam-panjakana frantsay izany.Zotra mizara ho roa miloko mavo sy menaAnisan’ny niatrika ny fanaovan-tsonia ny filoha Rajoelina ka misongadina amin’ny fifanarahana ny zotram-pitaterana miisa 12, mirefy 12 km ahitana fiantsonana miisa 12. Mizara ho roa izany ka hisy ny loko mavo mampitohy an’Anosy-Andohalo-Ambanidia ary hatreny Ankatso. Ny zotra mena kosa, mampitohy an’Anosy – Ambohijatovo- Analakely-Soarano-Antanimena-Ankorondrano-Ivandry ary hatreny Ambatobe.Etsy andaniny, voarakitra ao amin’ny fifanarana koa ny fampiakarana ho 50% ny famokarana herinaratra ao Mandraka raha 15% izany teo aloha.Nihazo ny any Etazonia, taorian’izany ny filoha Rajoelina Andry ary nigadona tao amin’ny seranam-piaramanidin’i John F. Kennedy – JFK, omaly ihany. Hanatrika ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana (ONU), ara-potoana andiany faha-76 ny tenany.Sambany hiatrika ny fivorian’ny ONU ny filohaSambany amin’ny maha filoha, voafidy ara-pomba demokratika azy ny hiatrehany izany raha nataony ho laharam-pahamehana ny fifantohana tamin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ny taona 2019 raha vao nandray fitondrana izy. Nisolo tena an’i Madagasikara tamin’izany tany amin’ny fivorian’ny ONU ny Praiminisitra Ntsay Christian ny taona 2019. Natao tamin’ny alalan’ny “Visioconférence” kosa ny fihaonambe andiany faha-75 noho ny Covid-19 naneran-tany. Handaha-teny mandritra ny adihevitra eo anivon’ny ONU ny filoha Rajoelina Andry, ny alarobia ho avy izao. Eo koa ny ho fihaonany amin’ireo tomponandraikitra ambony samihafa sy ny lehiben’ireo Andrimpanjakana iraisam-pirenena mandritra izao fihaonana an-tampony izao.Synèse R.L’article Fiaraha-miasa amin’i Frantsa: raikitra ny zotra an-tariby “téléphérique” Anosy- Ankatso a été récupéré chez Newsmada.
Douanes – Impôts : Pas de privatisation en vue.
Les administrations des douanes et des impôts ne seront pas privatisées. Le Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances Andry Ramanampanoharana a précisé hier lors d’une conférence de presse qu’il n’y a aucun projet de confier les douanes et les impôts actuellement. « Ce sont des fonctions régaliennes de l’Etat qu’aucune entreprise privée ne peut assumer », a-t-il précisé. En fait, il y a bien actuellement une assistance technique financée par la Banque Africaine de Développement pour la mise en place d’un modèle de collecte de recettes fiscales et douanières plus efficientes. Et ce, dans l’objectif d’augmenter les recettes publiques. Ce projet qui date de 2019 est réalisé en concertation avec les parties prenantes. L’on apprend d’ailleurs qu’un représentant des syndicalistes était déjà envoyé au Rwanda dans le cadre d’un échange d’expériences sur le système de collecte de recettes fiscales. En tout cas, le processus est encore dans une phase d’étude et aucune décision n’a été encore prise. R.Edmond L’article Douanes – Impôts : Pas de privatisation en vue. a été récupéré chez Midi Madagasikara.